ဆား ပုလင်းမြမောင်နှင့် ဆယ်ဂေါ်လီတုတ်ကြီး – Hlataw.com
ကိုမြမောင်တယောက် မင်းကြီးဆမြူရယ်ကို “မြေနိုးအဖြူကောင် ယီးပဲကွာ..” ဟုဆဲဆိုမိ၍ ရန်ကုန်တာမွေဂတ်မှာ တာဝန်ကျနေရာမှ သာယာဝတီနယ်သို့ ပြောင်းရွှေ့ခံလိုက်ရသည်။ ဖြစ်ပုံကဒီလို ကိုမြမောင် စနေ တနင်းဂွေ ဆိုရင် အလုပ်ပိတ်သဖြင့် တာမွေးဈေးအနီး ဖာဂေါင်းထွန်းကြည်အိမ်မှာ အချိန်ဖြုန်းတတ်သည်။ ဖာဂေါင်းထွန်းကြည်မှာ ကိုမြမောင်၏ ဆက်သား(စပိုင်ပေါ့)။ ယခုခေတ်အခေါ် ထောက်လှန်းသတင်းပေးသူဖြစ်ပေသည်။ ထိုအပါတ်က ထွန်းကြည်ထံမှ ခဲခြစ်စာတခုရရှိသည်။ စာထဲတွင်။ ကိုမြမောင်ခများ အညာထန်းသီး အသစ်တွေရမယ် လာယူပါဟု ရေထားသည်။
ကိုမြမောင် ထိုစာကြောင့် အရမ်းပျော်သွားလေသည်။ အညာထန်းသီးဆိုသည်မှာ အညာသူ ဖာအသစ်ရောက်ရှိသည်။ လာဘွတ်ပါဟု အဓိပ္ပါယ်ရလေသည်။ ဖာကောင်းထွန်းကြည်သည် အသစ်ရောက်တိုင်း ကိုမြမောင်ကို အရင်ကျွေးပီးမှ အရာရှိများ သထေးများဆီသို့ တဆင့်ဈေးကွက်တင်သူ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ထွန်းကြည်အိမ်သို့ အစောကြီးရောက်နေလေသည်။ “ဆရာသမားရေ အခန်းထဲမှာ ထန်းသီးရှိတယ် ဝင်စားပေတော့.. စားပီးရင် အမောဖြေဖွာဖို့ ငါးသုံးလုံးစီးကရက်လေးလဲ အသင့်ပါဗျ..” ထွန်းကြည် မှာစရာရှိမှာပီး အပြင်ထွက်သွားလေသည်။ ကိုမြမောင်သည် ခန်းစည်း အဖြူလေးကာထားသော ဆယ်ပေးပတ်လည် အခန်းလေးထဲဝင်သွားသည်။ နက်မှောင်နေသော ဆံကေသာကို ဖြေလျော့ထားပီး သူ့ကိုကျောပေးကာထိုင်နေသော လုံးကြီးပေါက်လှ အမျိုးသမီးငယ်လေးကို တွေ့လိုက်ရသည်။
မြမောင်မှာ စုံထောက် နယ်ထိန်းဖြစ်၍ အနားသို့ ချက်ချင်းမကပ်ပဲ.. “ရှေ့က ညမလေး ဒီဘက်လှည့်ပါလား ကော်ရီး ကြည့်ချင်လို့ပါ” “ရှင်က အင်မတန် စေ့စပ်သားပဲ.. အနားကပ်မလာပဲ အဝေးကလှမ်းမေးနေတယ်.. သတိဆိုတာ ပိုတာမရှိဘူးဆိုတာ.. ရှင်နဲ့တွေ့မှ ယုံတော့တယ်” မိန်းခလေးမှာ မြမောင်ဘက်လှည့်လေသည်။ ရွှန်းလဲ့သော မျက်ဝန်းနှင့်အတူ ရွှေအိုရောင်လို မှုန်းတဲ့အသား၊ လည်တိုင်ကျော့ရှင်းလှပပီး ဇာအင်းကျီးလေဝတ်ထားသဖြင့် အနက်ရောင် ဘော်လီဝတ်ထားတာမြင်ရသလို ရင်သားနှစ်ဆိုင်မှာ ပြည့်တင်းစွာ လျှံ့ထွက်နေလေသည်။ နှာတံသွယ်၍ နှုတ်ခမ်းလေးများ နှင်ဆီဖူးသဖွယ် စိုအိနေလေသည်။ မြန်မာဆန်ဆန် မိန်းမထိုင် ခြေသလုံးကွေးလေးထိုင်နေသဖြင့် တင်သားဆိုင်က ကော့ထွက်နေလေသည်။
“ကျမနာမည် ခင်ခင်လေးပါ.. ကျမအဖေက ရေနံချောင်းက ဆန်စက်သထေး ဦးဘကလေး ပေါ့” “အိုး..မိုင်ဂေါ့..သထေးသမီးပဲဘာလို့ ထွန်းကြည်ဆီရောက်ရသလည်းဗျ.. ဒါက ဖာချတဲ့နေရာလေ.. မခင်လေးနဲ့မသင့်တော်ဘူး” “ကျမ သိပါတယ် ကိုမြမောင်.. ကျမအဖေက ရာထူးဥစ္စာ အရမ်းမက်ပီး ကျမကို အဖြူကောင် နဲ့ပေးစားမလို့လုပ်နေလို့ ထွက်လာတာပါ… ကျမ အပျိုရည်ကို အလကားမဖြစ်စေရဘူး.. ဒါကြောင့် ရှင့်လိုနိုင်ငံကျော် စုံထောက်ဆီမှာ အရင်ခံပီးမှ အဲ့အဖြူကောင်ကို ယူမှာပါ..” မြမောင် ဘဝင်မြင့် တတ်သူမဟုတ်ပါ။ တည်တည်ငြိမ်နှင့်.. “အဲ့တော့ ရန်ကုန်ကိုအလည်သွားမယ်လို့ညာပီး ကျုပ်ဆီလာတွေ့တယ်ဆိုပါတော့” “အမှန်ပါပဲ..ရှင်နဲ့အတူအိပ်ပီး ကိုယ်ဝန်ဆောင်မယ်.. ရှင့်သွေးသားကိုလိုချင်လို့ပါ” “ဟုတ်ပါပီ အမိ စကြရအောင်..” မြမောင် လက်မြန်သူဖြစ်၍ သူ၏ ဘောင်းဘီရှည်နှင့် ကုတ်အင်းကျီကိုချွတ်ချလိုက်သည်။ ၈ လက်မခန့် လီးကြီးမှာ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဖြင့် ပေါင်နှစ်ခုကြား တွဲလဲခိုနေသည်။ မခင်လေးမှာ မတ်တပ်ရပ်နေသော မြမောင် အရှေ့ရောက်လာပီး ဒူးထောက်ထိုင်ကာ လီးကို လက်နှစ်ဖက်နှင့်ဆုတ်ကိုင်ပီး ဒစ်ထိပ်ကို စတင်၍ စုပ်လိုက်သည်။
ထိုခေတ်အခါက ပုလွေပေးတာ လူတိုင်းမသိပေ။ ခင်ခင်လေးမှစတင်၍ ပြုလုပ်သဖြင့် ခေတ်အဆက်ဆက်ဖာများ လက်ဆင့်ကမ်းကာ အိမ်ထောင်သည်များအထိ ပြန့်ပွားလာခဲ့သည်။ ကိုမြမောင် လီးစုပ်မခံဖူးပေ။ အလိုးသက်တမ်း ကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့ ယခုမှ အစုပ်ခံအမှုတ်ခံရဖူးသည်။ ကောင်းလေစွ၊ ခင်လေးမှာ အင်မတန် ညင်သာလှပေသည်။ လီးကိုစုပ်နေရင်း လဥများကို ဖွဖွလေး နှိပ်နယ်ပေးပြန်သည်။ ထို့နောက် လဥမှတဆင့် လီးအောက်ခြေ အကြောကို လျှာနဲ့ ပွတ်ဆွဲလေသည်။ ထိုအတိုင်းဆို သုတ်ပမ်းထွက်နိုင်တာ ကိုမြမောင် ရိပ်မိလိုက်သည်။ “မခင်လေး ရပ်ပါတော့ ကျုပ်သုတ်ရည်တွေ အလကားမဖြစ်ချင်ဘူး လိုးသင့်ပီလေ” “အကို့သဘောပါရှင် ကျမပက်လက်လှန်ရမလား..” “အင်း မခင်လေးက ပထမဆုံးအကြိမ် အလိုးခံမှာဆိုတော့ ရိုးရိုးပဲလိုးကြမယ် တချီပီးမှ ပုံစံပြောင်းကြမယ်” အဝတ်အစားများချွတ်၍ မခင်လေး ခလေးမွေးခါနီး မိန်းမများလို ပေါင်ကားပေးလိုက်သည်။ ရှောက်သီးလုံးအရွယ် နို့သားကြီးများမှာ ကိုင်ရက်စရာမရှိအောင် လှပလွန်းသည်။
အနက်စောက်မွှေးများမှာ ဆီးခုံအလယ်မှစ၍ အပေါ်သို့ ညီညာစွာ ထောင်နေလေသည်။ (ပန့်ကေပုံစံဖြစ်သည်) အဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားများမှာ စိနေသည်။ တရုတ်မများ လက်တိုဝတ်ပြီး လက်တွဲလောင်းချလျင် သင်ကြည့်ကြည့်ပါ။ ဖွေးဖွေးစိနေပီး ဗီ ရှိတ်ပုံစံဖြစ်သည်။ ကိုမြမောင် လီးတဝက်ကိုကိုင်၍ အဖုတ်ဝကို ဖိချလိုက်သည်။ မဝင်နိုင်ပါ အပျိုအစစ်မို့ တင်းခံနေသည်။ “မခင်လေး လက်နဲ့အဖုတ်ကိုဖြဲပေးထားပါ အပေါက်က အရမ်းသေးနေတယ်” မခင်လေး လက်ချောင်းများဖြင့်ဖြဲပေးသောအခါ လက်ညိုးဝင်ရုံအပေါက်လေးပေါ်လာသည်။ ကိုမြမောင် တံထွေးကိုလီးမှာ သုတ်လိုက်ပီး အားပိုသုံးကာ ထိုးသွင်းလိုက်သည်။ “ဗြိ..ဗြစ်..အိ..အီး…” ဒစ်ဝင်သွားသည်။ တံတွေးကို လီးမှာ ထပ်သုတ်လိုက်ရာ.. “ဒုတ်..အ..” ဝင်သွားပီ မခင်လေး လိုးမယ်နော် နာရင်အောင့်ခံပါ..” “ကျမခံနိုင်တယ် ကိုမြမောင် စိတ်ရှိသလိုလိုးပါ” အင်မတန်ပြတ်သားသောမိန်းမဖြစ်ပေသည်။ လီးကြီးနှင့် ပါကင်ဖောက်ခံရနေသော်လည်း လုံးဝမအော်ပေ။ လှေကြီးထိုး လိုးပေးလိုက်ရာ သုတ်ရည်များ သားအိမ်ထဲဝင်သွားလေသည်။
မခင်လေးဗိုက်အတွင်းမှ ခပ်နွေးနွေးအရသာကို ခံစားလိုက်ရသည်။ “ကောင်းလိုက်တာ ကိုမြမောင်ထပ်လိုးပါ..” “ကုန်းလိုက်ပါ မခင်လေး” ဝင်းအိနေသောတင်သားဆိုင်များကို ဆုတ်ကိုင်ပီး အနောက်မှဆက်တိုက်လိုးလိုက်ရာ အရည်များဆက်တိုက်ထွက်၍ မခင်လေးပီးလေသည်။ ထိုစဉ်… “ဆရာသမားရေ..” ထွန်းကြည်အသံကျယ်ကြီးကြားလိုက်ရသည်။ “ဘာလဲဟ..အလန့်တကြားနဲ့..” “မင်းကြီး ဆမြူရယ်က ဆရာသမားကို အရေးတကြီး ရှာနေတယ်ဗျ လူသတ်မှုဖြစ်လို့တဲ့” ထိုအခါမခင်လေးက တချက်ပြုံးလိုက်ပီး “ကိုမြမောင် ကျမတို့ထပ်တွေ့ကြမှာပါ.. ရှင်လဲ အလုပ်ပေါ်လာပီပဲ.. သွားလိုက်လေ ကျမစောင့်နေပ့မယ်” လီးရှိန်က ခုထိမသေသေးပေ။ လိုးလို့ကောင်းနေကာမှ ဒီမြေနိုး လာနှောက်ယှက်နေတယ်။ “အေး..ငါအခုလာခဲ့မယ် လို့သတင်းပို့လိုက်” မြမောင် မခင်လေးကို နှုတ်ဆက်လိုက်ပီး တာမွေဂါတ် မင်းကြီးဆမြူရယ်ဆီ ထွက်သွားလေသည်။
ဂါတ်တဲသို့ရောက်သောအခါ လက်အောက်ငယ်သားများကို အင်းဂလိပ် မြန်မာလိုဆဲဆိုနေသော ဆမြူရယ်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။ ကိုမြမောင် တင်းပီးဝင်သွားလိုက်သည်။ “ဟာ လူကလေးမြမောင် ဘယ်တွေသွားနေတာလည်း.. ကျုပ်ခဗျားကို လိုအပ်နေတယ်” “ကျုပ်ဟာကျုပ် ဘယ်သွားသွား ခများစောက်ပူပါလား.. အခုပိတ်ရက် ခဗျားနားမလည်ဘူးလား.” “ပြန်မအော်နဲ့လူကလေး မင်းနယ်ရောက်သွားမယ် နားလည်လား” ထိုအခါ ဆာပုလင်းမြမောင် က အင်မတန်ပီသသော အင်းဂလိပ်အသံဖြင့်. “ငိုးမ…မြေနိုး..လီးပဲလေ” ဟုပြန်ဆဲလိုက်ရာ..မင်းကြီးမျက်နှာနီရဲသွားပီး “မင်းအခု ချက်ချင်း သာယာဝတီကိုပြောင်းစေ” ဟုအမိန့်ချလေသည်။ ကိုမြမောင်၏နာမည်ကျော်ကြားမှုကြောင့် သာယာဝတီနယ်မှ လူဆိုးသခိုးများ ကြက်ပျောက်ငှက်ပျောက် ငြိမ်သက်သွားသည်။
ထို့ကြောင့် သူလဲအားယားနေပီး အကြမ်းရေလေးသောက် ဂွင်းထုလိုက်နှင့် သာယာနေလေသည်။ တနေ့မနက် ကိုမြမောင်ထံ စာတစောင်ရောက်လာသည်။ ထိုစာမှာ မင်းကြီး ဆမြူရယ်မှာ အမျက်တော်ပြေ၍ တာမွေဂါတ်သို့ ပြန်လာရန်ခေါ်စာဖြစ်သည်။ ကိုမြမောင်သိပါသည်။ သူရန်ကုန်မှာမရှိလျင် မြေနိုးလူဆိုးများ ထကြွနေကြမှအမှန်ပင်။ ထို့ကြောင့် ရန်ကုန့်သို့ လှည့်ရပါတော့သည်။ ဗဟန်း ရေတာရှည်လမ်း ရတနာပွဲစား ဒေါ်မြမြ အိမ်ရှေ့တွင် သတင်းထောက်များ စုရုံးရောက်ရှိနေကြသည်။ ပုလိပ် များက ခြံတခါးဝမှာ စောင့်ကြပ်နေကြသည်။ မဟူရာရောင်ဆေးခြယ်ထားသော ထိုအိမ်မှာ ကြီးမားလှပေသည်။ အပေါ်ထပ် အောက်ထပ်ပြဿဒ်က နုတ်များပြုလုပ်ထား၍ အိမ်ရှင်ဒေါ်မြမှာ လူကုန်ထန်တဦးမှန်း သိသာလေသည်။ အိမ်ရှေ့ဧဲ့ခန်း ကျယ်မှာ ဒရိုက်ဘာ မဲကြီးနှင့် အိမ်ဖော် ဖြူတုတ်တို့ကို ပုလိပ် စိန်ဝင်း က စစ်ဆေးမေးမြန်းနေလေသည်။
“”မင်း ညနေက ဘယ်ရောက်နေလည်း” မဲကြီးမှာ ကြောက်ဒူးတုန်ပီး “ဒေါ်မြက ကြက်လျှာစွန်းဒံပေါက်စားချင်တယ် သွားဝယ်ပါ ခိုင်းလို့ သွားနေတာပါ” “ဟုတ်ပီ..ဟဲ့ဖြူတုတ် နင်ကရောဘာလုပ်နေလဲ..” အိမ်ဖော်ဖြူတုတ်မှာ မျက်နှာငယ်လေးနှင့် “ကျမ အခန်းထဲမှာ အိပ်နေတာပါ.. ဒေါ်မြအော်သံကြားလို့ သူ့အခန်းကို သွားဖွင့်ကြည့်တာပါ.. အဲ့ချိန်မှာ ဒေါ်မြသေနေတာပါ… အီး..ဟီး..ဟီ.” “မဲကြီး..ဒံပေါက်ဝယ်တယ်မဟုလား.. ဘယ်မှာလည်း ဒံပေါက်” မဲကြီး ကြောက်လန့်မှုက အထွတ်အထိပ်ရောက်လေပီ။ “ကျနော်ပိုက်ဆံအိတ်ယူဖို့ မေ့လို့ပြန်လှည့်လာတာပါ… ကျနော်မသတ်ပါဘူးဗျ.. အီး.. ဟီး..” မဲကြီးငိုချလေသည်။ “တိတ်ဇမ်း..ပုလိပ်တွေ အဲ့ကောင့်ကိုဖမ်းလိုက်တော့ ဒီကောင်သတ်တာ” “ဖြူတုတ် င့ါကိုကယ်ပါအူးဟ” ဖြူတုတ်လဲ ဘာမှမတတ်နိုင်ငိုကြွေးတော့သည်။ မဲကြီးလက်ထိပ်ခတ်ထားခံရစဉ်မှာ ကောင်းဘွိုင် ဦးထုပ်ကိုဆောင်းထား၍ ကုတ်အင်းကျီအရှည်ကြီးကို ဝတ်ထားပီး နက်ပြောက်နေသော ရှူးဖိနပ်စီးထားလျက် စမတ်ကျကျရနေသော လူတယောက်ဝင်လာလေသည်။
“ဟာ..ကိုမြမောင်..ခဗျားလာတာနောက်ကျပီဗျ… ကျုပ်တရားခံမိပီ.. အဲ့တာမဲကြီးပဲ” စိန်ဝင်း တယောက် အောင်မြင်သောအသံကြီးနှင့် ကြွားဝါနေလေသည်။ ကိုမြမောင် မှာ စိန်ဝင်းကို စောက်ဖက်မလုပ်ပဲ ကြမ်းပြင်ပေါ် ထိုင်ငိုနေသော ဖြူတုတ်မ အနားသွား၍ “ညမလေး..ကော်ရီးမေးစရာရှိလို့.. ခဏလိုက်ခဲ့ပါ..” ကိုမြမောင် သည် ဖြူတုတ်ကိုခေါ်၍ လူသတ်မှုဖြစ်ရာ အခန်းသို့ ဝင်သွားလေသည်။ မြကတီပါမွေ့ယာကုတင် စောင်းမှာ ဖင်ကုန်းလျက် သေနေသော ဒေါ်မြကိုတွေ့ရသည်။ လွန်ခဲ့သော မိနစ်၃၀မှာ အသတ်ခံရ၍ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ရှိသေးသည်။ အသတ်ခံရပုံမှာ လည်ဂုတ်တွင် ၆လက်မအရွယ် ဓားစိုက်ခံရပီး စအိုဝနှင့် အဖုတ်များမှာ သွေးထွက်လွန်သေနေခြင်းဖြစ်သည်။ ဒေါ်မြသည် ၄၅ နှစ်အရွယ်ချောမောလှပပီး ကျွဲကောသီးအရွယ်နို့သားကြီးများရှိသလို ဖြူဖြူကိတ်တိတ် တင်သားနှင့် အရပ်မောင်းမြင့်သော မိန်းမတယောက်ဖြစ်သည်။ လင်သားမရှိသားသမီးမရှိ ကာလသားတိုင်း လိုးချင်နေသောအကိတ်မဖြစ်သည်။
ဖြူတုတ်မှာ အလောင်းကိုမြင်ပီး ”အမလေး မမကြီးရယ် အလိုးခံပီးသေရတယ်လို့ ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ” ဟု အော်ကာငိုပြန်သည်။ ကြမ်းပြင်အထက်မှာ မြေပဲစိအရွယ်စိန်များပြန့်ကြဲနေကြသည်။ ကိုမြမောင် တယောက်ထိုစိန်များအတွင်းမှ ပစ္စည်းတခုကို ကောက်ယူလိုက်ပီး နှုတ်ခမ်းမဲ့ကာ ပြုံးလိုက်လေသည်။ ကုတ်အတွင်း စီးကရက်ဘူးမှ တလိပ်ဆွဲယူ မီးညှိရှိုက်ဖွာကာ.. “ညမလေး..က မဲကြီးနဲ့ လိင်ဆက်ဆံထားတာ မကြာသေးဘူးမလား” ထိုသို့မေးခြင်းကြောင့် ဖြူတုတ်လန့်သွားလေသည်။ ဒါပေမဲ့ မဖြေ.. “နင် မဖြေရင် မဲကြီး တသက်တကျွန်း ထောင်ကျလိမ့်မယ်..ဖြေပါ..” ထိုအခါမှ ဖြူတုတ်က သက်ပြင်းရှည်ချပီး “ဟုတ်ပါတယ်..ကျမတို့အခန်းမှာ ဆက်ဆံနေတာပါ” “ကျုပ်ဘလိုသိလဲ မေးချင်တယ်မဟုလား. နင့် ထမီနောက်မှာ အရေတွေထွက်ပီး ကွက်နေတယ်လေ.. လိုးတာ မကြာသေးလို့ပေါ့ဟ.. နင့် အခန်းကို သွားကြတာပေါ့.. အဲ့မှာ ဆက်ပြောကြမယ် ကျုပ် ကိုသိမျှ အကုန်ပြောပါ.. နင့်ဘဲ မဲကြီးကို ငါပဲကယ်နိုင်တယ် အိုကေ လား” “ဟု ကျမနောက်ကလိုက်ခဲ့ပါ…” မြမောင်နှင့်ဖြူတုတ် ဒေါ်မြအခန်းမှထွက်၍ အောက်ထပ်ဖြူတုတ်အခန်းဆီသွားကြသည်။
ပုလိပ်များနှင့် စိန်ဝင်းတို့တသိုက် အလောင်းသိမ်းရန် ပြင်ဆင်နေကြ၍ သူတို့နှစ်ယောက်ကို သတိမထားမိပေ။ ဖြူတုတ် နာမည်နှင့်လိုက်အောင် ဖြူဖြူတုတ်တုတ်ဖြစ်သည်။ (ဟာသမင်းသမီး ဂွမ်းပုံနှင့်ခပ်ဆင်ဆင်) ခါးသေးသေးလေးမှာပန်းရောင် ထမိန်ခပ်ကြပ်ဝတ်ထား၍ တင်သားမှာ အယ်ထွက်နေသည်။ လိုးနေချိန်မှာ အမှုဖြစ်၍ အတွင်းခံဝတ်မထားပဲ လာကြည့်ပုံရသည်။ အရေအကွက်လိုက်ပေါ်တာ သတိမထားမိပေ။ ဖြူတုတ် အခန်းထဲဝင်စဉ် မြမောင်ကလိုက်ဝင်ပီး တခါးမင်းတုံးကို ချလိုက်လေသည်။ “ကဲ..ဖြူတုတ် ကုတင်မှာ ထိုင်ပါ..ငါစမေးမယ်… မဲကြီးလီးက ဘယ်လောက်ကြီးလဲ..” “ကျမ မပြောတတ်ဘူးရှင့်..မတိုင်းကြည့်ဖူးဘူး.” “ဟုပီ..ငါပြမယ်” ဟုဆိုကာ မြမောင်က ဘောင်းဘီဇစ်ကိုဖြုတ်ချ၍ သူ့လီးကိုထုတ်ပြလေသည်။ ၈ လက်မ စော်ကြည်လီးကြီးမှာ အကြောအထစ်ထစ်နှင့် အမြောင်းလိုက်ပေါ်လာလေသည်။
“အို..ရှင်..ဘာလုပ်တာလဲ” “ငါမေးတာ ဖြေပါ ငါ့လီးလောက်ကြီးလား” “ရှင်က..နာမည်ကြီးစုံထောက်ဖြစ်ရုံမက… လီးပါ ပြိုင်စံရှားပဲ.. ရှင့်လီးတဝက်ပဲမဲကြီးကရှိတာပါ” “သေးလားကြီးလား..သိအောင်ကိုင်ကြည့်ပါ.ဖြူတုတ်.” မြမောင် ဖြူတုတ်မျက်နှာရှေ့လီးကို တိုးကပ်လိုက်ပီး ပြလေသည်။ ဖြူတုတ် တံထွေးများမြိုချလိုက်ပီး လီးကို ကိုင်ကြည့်လေသည်။ “မဲကြီးဟာက သေးပါတယ် ရှင့်ဟာက လက်ထဲမှာ ပြည့်ရုံမက ထိပ်ဒစ်ကြီးပါအယ်နေတာ.” “နင် ဂေါ်လီသိလား” “ဟုတ်သိပါတယ် ပီးခဲ့တဲ့တပါတ်က.. ကျမ က မဲကြီးကို ပြောတယ် ရှင့်လီးကသေးတယ် ခံလို့ မကောင်းဘူး ကြီးအောင်လုပ်လိုက်ပါ ပေါ့..ဒါကြောင့် သူ အပြင်မှာ ဂေါ်လီထဲ့လာပါတယ်” “အဲ့တော့ ဆက်ပြောပါ.” ဖြူတုတ်မှာ မြမောင်လီးကို ရမက်ထန်ထန် ကြည့်နေလျက် ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ် ဂွင်းထုနေမိသည်။ “သူဂေါ်လီထည့်လာတာ ဒီနေ့တပါတ်ပြည့်တာပါ ဒါကြောင့် စမ်းလိုးကြည့်နေတုန်း ဒေါ်မြခေါ်သံကြားတယ်.. ဒေါ်မြက ဒန်ပေါက်စားချင်တယ် ဝယ်ပေးပါပြောလို့ သူက ဟုတ်ကဲ့ ပြောပီး.. အပြင်ထွက်ဟန်ဆောင်တယ်.. တကယ်တော့ မသွားပါဘူး.. နောက်ဖေးအပေါက်က ပြန်ဝင်ပီး.. ကျမတို့ဆက်လိုးနေကြတာပါ..” “ဂေါ်လီနဲ့လိုးတာ ကောင်းလား..” “မကောင်းပါဘူးရှင်..အဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားတွေ နာလွန်းလို့ ကျမ မပီးနိုင်ပါဘူး” ဖြူတုတ်ပြောပြတာနားထောင်ရင်း မြမောင်လီး ထိပ်အရည်ကြည်များ ထွက်နေလေသည်။
ဖြူတုတ်လက်ညှိုးလေးနဲ့ထိုအရေကြည့်ကို ထိလျက် ဒစ်ထိပ်ညိုကို ပွတ်နေပြီး “မြမောင် ကျမကို ဖင်ကုန်းခိုင်းပီးလိုးပါတယ် သူ့သုတ်ရည် တွေထွက်တဲ့အထိပဲ.. အဲ့အချိန် ဒေါ်မြအော်သံကြားလို့ ကျမတို့လိုးတာရပ်ပီး.. ဒေါ်မြအခန်းဆီသွားတာပါ.. အဲ့မှာ ဒေါ်မြသေနေပီ” “ဟုပီ..နင် အမှန်ပြောတာ ငါလက်ခံတယ်.. မဲကြီး အပြစ်မရှိတာ ငါကူညီမယ်.. နင်က င့လီးနဲ့လိုးတာတော့ ခံရမယ်” ဖြူတုတ်မှာတကောင်ကြွက်မဖြစ်သည်။ မဲကြီးသာ သူ့ဘဝအဖော်ဖြစ်သည်။ မဲကြီးထောင်ကျလျင် သူ့ဘဝ ရေစုံမြောရပေတော့မည့်အဖြစ် မခံနိုင်ပါ။ ခုကယ်တင်ရှင်တွေ့ပီလေ။ ပီးတော့ ပြိုင်စံရှားလီးမျိုး နှင့်မခံလိုက်ရလျင် နှမြောစရာဖြစ်ပေမည်။ “ဟုတ် ဆရာကြီး ရှင်လိုးပါ ပီးရင် မဲကြီးကို ကယ်တင်ပါရှင်..” မြမောင် ခင်ခင်လေးနဲ့ လိုးစဉ်အခါက လီးစုပ်တာခံဖူး၍ သတိရလိုက်သည်။ “အရင်ဆုံး င့လီးကို စုပ်ပါ ရေခဲချောင်းစုပ်သလိုပေါ့.. ပီးရင် လဥကိုညင်ညင်သာ နှိပ်နယ်ပေးပါ.. အဲ့တာ ပီးရင် မဲကြီးလိုးသလို ဖင်ကုန်းလိုးပေးမယ်” ဖြူတုတ်စစုပ်ပါတော့သည်။ မြမောင်သင်ပေးတဲ့ အတိုင်း တခုမှမမှားအောင် လုပ်တော့သည်။
အာဂတွင်းနွေးနွေးကြား ဝင်ထွက်နေသော ဒစ်ကြီးကိုစုပ်ရတာအားရှိလှသည်။ “ပြွစ်ပြွစ်..အွင်း..ဘလွတ်…”. မြမောင် အကြိုက်တွေ့နေပီ။ “ရပီ..ကုန်းတော့.. ထမိန်လှန်ထား” ကုတင်စောင်းဘေး လက်ထောက်ကုန်ထားသော ဖြူတုတ်ဖင်ကြီးမှာ အယ်ထွက်နေသည်။ ဖြူတုတ်ခါးကို ဖိချလိုက်ပီးကော့တတ်လာသော ဖင်သားကြီးအောက်မှ စောက်ဖုတ် ကြီးအရည်ရွှဲ၍ အလိုးခံဖို့ အသင့်ရှိနေသည်။ မြမောင် အချိန်ဆွဲလို့မဖြစ် တရားခံဖမ်းရအူးမည်။ လီးကို အဖုတ်ဝတွေ့၍ လိုးပါတော့သည်။ “ဘွတ်..ဘွတ်..ဗြိဗြိ…အ့..ရှီး..” စပတ်အတွင်း တင်းကြပ်ဝင်လာသောလီးကြီးကို စပအတွင်းနရံနှင့် ညစ်ကာ ပေါင်ကို စိပေးလိုက်သည်။ မြမောင် လက်များ ဖြူတုတ် နို့များကို လှမ်းညစ်လိုက်ပီး အချက်မှန်မှန်လိုးတော့သည်။ “ကောင်းလိုက်တာ..ရှင်ကြီးရယ်.. မဲကြီးထက် အစတရာသာတယ်.. လိုးပါ မရပ်ပါနဲ့ ကျမ ပီးတော့မယ်” “ဂေါ်လီနဲ့လီးကြိုက်လား င့လီးကြိုက်လားပြောစမ်း” တင်သားများကို လက်ဝါးနှင့်တဖြန်းဖြန်းရိုက်ပီး လိုးမေး မေးတော့သည်။ “ရှင့်လီးကောင်းတယ်..အ့..အ့..” “ဘွက် ဘွက်..” အရည်များပမ်းထွက်ကြလာသည်။ မြမောင် လီးကို ဆွဲထုတ်၍ “ဟဲ့ နင်ပီးပီမဟုတ်လား.. ဒီဘက်လှည့် လီးပြန်စုပ်တော့…” ဖြူတုတ်ကြမ်းမှပြန်ထိုင်၍ လီးကို အဆက်မပြတ် ပြန်စုပ်တော့သည်။
“ပြစ်….ပြစ်…ပြစ်..” “အ့..ငါ သုတ်လွှတ်တော့မယ်.စုပ်စုပ်… အီး….” ဖြူတုတ်ခေါင်းကိုဆွဲကိုင်၍ လရည်များ အာဂေါင်တွင်းပန်းထည့်လိုက်လေသည်။ “အဟွတ်..အဟွတ်..” ဖြူတုတ်ဘာမှမတတ်နိုင် မြိုချလိုက်ရာ အနည်းငယ် သီးသွားလေသည်။ “ကဲ..ပီးပီ..ငါလဲ တရာခံသွားဖမ်းရမယ်.. မဲကြီး နောက်နေ့မှာ နင့်ဆီ ပြန်ပို့ပေးမယ် ဟုပီလား” “ကျေးဇူးကြီးပါပေ့..ရှင်ကြီးရယ်.. ရှင်လိုးချင်ရင် ကျမဆီ အချိန်မရွေးလာခဲ့ပါ..ရှင့်ကိုစွဲသွားပီ” မြမောင် ဘောင်းဘီဇစ်ပြန်ပိတ်၍ “ဟဲ့ နင်အရေ တွေ သုတ်ပီး အနားယူတော့.. ငါသွားပီ” အိမ်ရှေ့ ဧဲ့ခန်းမ အတွင်း မင်းကြီး ဆမြူရယ်ရောက်ရှိနေသည်။ “ဟာ လူကလေးမြမောင် အလာနောက်ကျတာလား.. ဒီမှာ စိန်ဝင်း က တရားခံမိနေပီ.. ဟား..ဟား” မြမောင် ထိုသူများကို စောက်ဖက်မလုပ်ပဲ သတင်းသမားကြား ကြည့်လိုက်ရာ ဖာဂေါင်း ထွန်းကြည်ကိုတွေ့လိုက်၍ “ကိုထွန်းကြည်ရေ..အချိန်နောက်မကျခင် တရာခံသွားဖမ်းရမယ်.. ခများလိုက်မှဖြစ်မယ်ဗျ” “ဟုတ်ပါပီ..ဆရာသမားရေ..သွားကြစို့” ဤတွင် (ဆားပုလင်းမြမောင်နှင့် ဆယ်ဂေါ်လီတုတ်ကြီး) အမည်ရ သည်းထိတ်ရင်ခုန်ဖွယ် ဇာတ်လမ်းကြီးစတင် ဖြစ်ပေါ်လာလေသည်။
ကိုမြမောင်နှင့်တပည့်ကျော်ဖာဂေါင်းထွန်းကြည်တို့ အော်စတင်ကား လေးဖြင့် တရားခံဖမ်းရန်ထွက်လာကြလေသည်။ သိပ်မကြာပါ ကြည့်မြင်တိုင်ဟံသာဝတီဘူတာသို့ရောက်ရှိလေသည်။ “ကိုထွန်းကြည်ရေရောက်ပီဗျို့သွားကြရအောင်..” “ဟာ..ဆရာသမား ဒါအနူတွေနေတဲ့နေရာလေဗျာ..” (ယခု အရိုးအထူးကုဆေးရုံ) “ဟုတ်ပ အဲ့မှာ ဂေါ်လီထဲ့ပေးတဲ့အိမ်ရှိတာ ခက်ဗျားလဲသိတာပဲ.. သွားကြရအောင်” “ဆရာသမားပစ္စည်းက ကြီးပီးသားလေဗျာ.. ဂေါ်လီထည့်အူးမလို့လားဗျ.. ဟားဟား…” “ကဲ နောက်မှပြောကြမယ်..တရားခံလွတ်သွားမယ်ဗျ..” နှစ်ထပ်အိမ်တခုဖြစ်သည်။ တံခါးဝရှေ့ရောက်သောအခါ မြမောင်က သေနတ်ကို အသင့်ကိုင်ထားပီး ခေါက်လိုက်လေသည်။ ဒေါက်..ဒေါက်..ဒေါက်.. “ဘာကိစ္စလဲရှင့်.” လှပကျော့ရှင်းသောမျက်နှာကလေးနှင့် ရှိုက်ဖိုကြီးငယ် ပြည့်စုံသော မိန်းခလေးက တံခါးလာဖွင့်ပေးလေသည်။ “ခင်လေး မတွေ့တာကြာပီနော်..မစ်နေတာ ကျုပ် တုတ်ကြီးနဲ့တွေ့ချင်လို့ပါ.” “ရှင့် သေနတ်ကြီး ချလိုက်ပါရှင်..ရန်သူတွေမှမဟုတ်တာ” ခပ်ချွဲချွဲလေသံလေးနှင့်သူမပြောနေသည်။
ထိုစဉ် သူမနောက်မှ ဒေါင်ကောင်းကောင်းနှင့် ရုပ်ရည်သန့်ပြန့်သော ယောက်ျားတယောက် ထွက်လာပြီး.. “ဟာ ကိုမြမောင်..ကျုပ်ထင်တာထက် စောပီးရောက်လာပါလား.. ဂေါ်လီထဲ့မလို့လားဗျ..ဟား..ဟား” ထိုသူမှာတုတ်ကြီးဖြစ်သည်။ ဘိုင်စကုတ်မင်းသားလို ခပ်နွဲ့နွဲ့ အနေအထားရှိပေမဲ့ ဒီနယ်တခွင်မှာနာမည်ကြီး လူမိုက်ဖြစ်သလို လူသတ်ရန် ဝင်မလေးသောသူဖြစ်သည်။ “ကိုတုတ်ကြီး..အေးဆေးအဖမ်းခံပါဗျာ.. ခများကြောင့် အပစ်မဲ့တဲ့သူ ထောင်ကျတော့မယ်” အပြစ်မဲ့သူဆိုသည်မှာ ဒရိုက်ဘာမဲကြီးကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ “ဟုတ်ပါပီ..ဒါနဲ့စကားမဆက် ကျုပ်သတ်တာဘလိုသိတာလဲဗျ” မြမောင်တချက်ပြုံးလိုက်ပီးအိပ်ကပ်အတွင်းမှ မြေပဲစိ အရွယ်လက်ရာမြောက် ဖန်ဂေါ်လီလေးထုတ်ပြလေသည်။ “ဂေါ်လီ တခု တွေ့တာနဲ့သိရောလားဗျ” “ဟားဟား.. ရန်ကုန်တဝိုက်မှာ..ဒီလိုဂေါ်လီ လုပ်တာခဗျားပဲရှိတယ် ပီးတော့ ဒေါ်မြလေးသေတုန်းက စိန်တွေပြန့်ကျဲနေတယ်လေ.. အဲ့ကြားထဲကကျုပ်ကောက်ရတာ.. ခများကလောဘသားမဟုတ်ဘူး ဆိုတာကျုပ်သိတယ်.. ဒါကြောင့် ဘာပစ္စည်းမှမယူပဲ ထွက်ပြေးသွားတာမဟုတ်လား”. “ကဲ ဖမ်းပါတော့ဗျာ..” “ကိုထွန်းကြည် သူ့ကိုလက်ထိပ်ခက်ပီး ခေါ်သွားလိုက်ပါ.. ဂါတ်ရောက်မှဆက်မေးကြတာပေါ့.. ကျုပ်ခင်လေးကို မေးစရာရှိသေးလို့နေခဲ့မယ်” ထွန်းကြည်မှာတုတ်ကြီးကိုခေါ်သွားပီနောက် မြမောင် နှင့်ခင်လေး ကျန်ခဲ့လေသည်။
ခင်လေးမျက်ရည်လေးတွေဝဲနေသည်။ “စိတ်မကောင်းပါဘူး မခင်လေး.. ခများနဲ့ကျုပ်ထွန်းကြည်အိမ်မှာ လိုးတဲ့နေက လူသတ်မှု ဖြစ်တာ ခများလည်းသိတာပဲ.. ကျုပ်နယ်ပြောင်းရလို့.. ခများအကိုတုတ်ကြီးကို မဖမ်းခဲ့ဘူး.. ခများက ကြံရာပါဆိုတာသိပါတယ်” ခင်လေး မျက်ရည်များကျပီး “ရှင် သိလား ကျမ အပျိုရည်ကိုရှင့်ကိုပေးပီးနောက်ပိုင်း ရှင့်ကို အမြဲသတိရနေတယ်..အဲ့နေ့က ကျမတို့ရဲ့ရန်သူတွေကို သတ်မလို့အကွက်ဆင်ပီးသားလေ.. ရှင်က အဖမ်းအဆီးတော်လို့ ကျမ အပျိုရည်ကိုရှင့်ကိုပေးပီး.. အကိုတုတ်ကြီး လူသတ်လို့ရအောင် စီစဉ်ခဲ့တာပါ.. ရှင် ဖမ်းချင်ရင်ဖမ်းပါ ကျမမငြင်းပါဘူး” မြမောင်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပီး သူမပခုံးသားလေးကို ဆွဲကိုင်ကာ.. “ခင်လေးရယ် ဖမ်းစရာလား.ကော်ရီးက ခင်လေးကို.. သတိရနေတာပါ.. ပီးတော့ ဒီနှုတ်ခမ်းရဲ့ စုပ်ချက်တွေကို လိုချင်သေးတယ်လေ” မြမောင် သူမကို နှုတ်ခမ်းချင်းတေ့ပီးလျှာလေးနဲ့ မွှေလိုက်သည်။ “အို ကိုရယ်..ကျမ ခံချင်တယ် လိုးကြမလားဟင်” ခင်လေးမျက်ရည်များကြားမှ တောင်းဆိုလာသလို ခါးလေးကော့ပေးပီး သိုင်းဖက် လာလေသည်။
အိမ်ရှေ့တွင် ထမင်းစား စာပွဲသာရှိသည်။ ထိုစာပွဲပေါ် ခင်လေးကို မတင်လိုက်သည်။ ရင်ဖုံးအင်းကျီလေးကို ကြယ်သီးဖြုတ်လိုက်သည်။ ဘော်လီမရှိ လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ပေါ်လာသော နို့သားဝင်းဝင်းလေးကို ဆုတ်နယ်ပေးလိုက်သည်။ ” အင်း…ကိုရယ် နို့စို့ပေးပါ..” မြမောင်နို့ကုန်းစို့ရင်း ပါတိတ်ထမိန်ကိုဆွဲလှန်၍ အဖုတ်သားနုနုလေးထဲ လက်ခလယ် သွင်းလိုက်လေသည်။ ခင်လေးမှာ မြမောင်ရဲ့ဆံပင်ကို ဆွဲကိုင်ထားပီး ခေါင်းမော့ကာဖီးတက်နေသည်။ “ကို ရယ်..ရှင် တခါလိုးပီးကထည်းက.. ကျမ ဘယ်သူနဲ့မှ မခံခဲ့ပါဘူး.. တနေ့ရှင်လာမယ်ဆိုတာသိလို့ စောင့်နေတာပါ.. အားရပါးရလိုးပေးပါ..” “ခင်လေး..စုပ်ပေးနော်..” သူမ ခုံပေါ်မှပြန်ဆင်း၍.မြမောင်ရဲ့ဘောင်းဘီကို ချွတ်ပေးသည်။ ထောင်မတ်နေသောလီးက အကြောအပြိုင်းပြိုင်းနှင့် ရင်ဖိုစရာကောင်းလှသည်။ နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးနှင့် လီးထိပ်ကို ငုံလိုက်ပီး လျှာလေးနဲ့ မွှေပွတ်လိုက်ရာ “အား.. ကောင်းလိုက်တာ..” မြမောင် ခါးကော့သွားလေသည်။ ရှည်လွန်းသော လီးဖြစ်၍ အကုန်မသွင်းနိုင်ပဲ တဝက်လောက်သာစုပ်ပေးနိုင်သည်။ လီးအောက်ခြေကျင်ကြောကို လျှာနဲ့အထက်အောက်ပွတ်ဆွဲပီး လဥကိုစုပ်လေတော့သည်။ လဥစုပ်နေစဉ် လွတ်နေသောလီးကို ဂွင်းထုပေးပြန်သောအခါ မြမောင်မခံနိုင်ပါ သုတ်များ ပန်းထွက်ပါတော့သည်။
“ဟာ ကျမ မခံရသေးဘူးလေ. ” “မပူနဲ့ခင်လေး ကျုပ်လီးက မကျဘူး.. ကုန်ပေးစမ်းပါ” ထမီချွတ်ချပီး ခုံဇောင်းမှာ ခင်လေး ခါလေးကော့ကုန်းလိုက်သည်။ ဆံပင် ရှည်များကို မြမောင်ဖြေချလိုက်ပီး စုကိုင်ကာ ခပ်စီးစီး အဖုတ်ထဲ လီးထိုးထဲ့လေသည်။ မြင်းလိုးသည့်ပုံစံဖြစ်သည်။ တင်သားနှင့် ဆီးခုံရိုက်ချက်နှင့်လိုးသံများထွက်လာတော့သည်။ ဇိ..ဇိ.ဇိ..ဖတ်..ဖတ်.. “အား..တဆုံးထဲ့လိုး..ကောင်းတယ်. အား….” ခင်လေးအော်ဟစ် နေရင်း သေးများပင် ထွက်ကြတော့သည်။ သူမ တကိုယ်လုံးတဆတ်ဆတ်တုန်ခါနေသည်။ မြမောင် လီးကို ဆွဲထုတ်လိုက်ပီး ဖက်သားဖွေးဖွေးကြီးကို ဆွဲဖြဲလိုက်၏။ ခရေပွင့်အလား စူနေသော စအိုလေးကို မြင်တော့ လိုးချင်စိတ်ပေါက်လာသည်။ မြမောင်မှာ အင်္ဂလန်အလည်သွားစဉ်က ဖင်လိုးသော ပုံများမြင်ဖူးသည်။ “ခင်လေး ဖင်ပေါက်က လှလိုက်တာလိုးချင်တယ်” “ရှင်ကြီး သဘောပါ ရပ့မလားရှင်.. အရမ်းသေးတယ်” မြမောင်လီးထောက်ကြည့်ရာ စအိုဝပျောက်သွားသည်။ သွင်းလို့မရ။ “ခင်လေး ဘာဆီရှိလဲ” “မုန့်ညှင်းဆီတော့ရှိတယ်..ယူပေးမယ်” ချစ်ဖို့ကောင်းသောခင်လေးပါ။ အခန်းထောင့်စင်ကလေးမှ မုန့်ညှင်းဆီဘူး ယူလာလေသည်။ မြမောင်ရဲ့လီးကို ဆီသုတ်ပေးပီး ပြန်ကုန်းလိုက်သည်။ ထို့နောက် လီးကို စအိုဝတွေ၍ သွင်းလိုက်ရာ ချောကနဲဝင်သွားတော့သည်။
“အား…အီး..နာတယ်..” ခင်လေး ထအော်လေတော့သည်။ “ဖင်က ပိုလိုးကောင်တယ်ဟ..ငြိမ်ခံပေတော့..” ..ဗြိ.. ဘွတ်..ဘွတ်..ဘွတ်.. အတွင်းလေများကန်ထွက်၏။ ထိုအသံများက ကာမစိတ် ပိုမိုထန်စေလေသည်။ “ကောင်းလာပီကိုရေ မရပ်နဲ့ လိုးလိုး..အ့” ခုံက တဖြည်းဖြည်းပိုနဲ့လာ၍..ကျိုးမှာစိုးရသည်။ ထိုကြောင့် ကြမ်းပြင်ပေါ် ရွှေ့လိုက်ပီး မုဆိုးဒူးထောက်ဆက်လိုးတော့သည်။ ကွမ်းတရာညက်ခန့်အကြာ မြမောင့် သုတ်ရည်များ ဖင်ထဲပန်းထည့်လေတော့သည်။ “ဟူး…ကောင်းလိုက်တာ” ခင်လေးမြမောင်ကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖက်ထားပီး “ကျမ အကို အမှုပီးရင်..ကျမဆီလာခဲ့ပါနော်” “အင်းပါကွာ….” နောက်တချီလောက်ထပ်လိုးကြပီး မြမောင် တာမွေဂါတ်ဆီသို့ပြန်လာခဲ့သည်။…… မင်းကြီး ဆမြူရယ် အလွန်ပျော်ရွှင်နေသည်။ “လူကလေးမြမောင် အရမ်းတော်တယ်..” “ဟို သတောင်းစား စိန်ဝင်းဖမ်းထားတဲ့ မဲကြီးကို ခုလွှတ်ပေးလိုက်ပါ မင်းကြီး သူ့မိန်းမစောင့်နေတယ်” ဆားပုလင်းမြမောင်ပဲလေ..တော်မှာပေါ့။ “လူကလေး ဒီညအားရင် ကျုပ်အိမ်လာခဲ့ပါ ညစာနဲ့ ဂုဏ်ပြုချင်လို့ပါ…” “ကျုပ်မှာ တုတ်ကြီးရဲ့ အမှုမှတ်တမ်းရေးရအူးမယ်.. ပီးရင်လာခဲ့မယ်..” မြမောင် ထိုသို့ပြောပီး စီးကရက်တလိပ်ဖွာရှိုက်၍ တုတ်ကြီးကို ဖမ်းထားသော အချုပ်ခန်းဆီ ထွက်လာခဲ့လေသည်။
“ကဲ..ကိုတုတ်ကြီးရေ..ခများရဲ့အမှုမှတ်တမ်းတင်ရအောင်… ပြောပေတော့” စီးကရက်တလိပ်ကို တုတ်ကြီးပါးစပ်မှာတတ်လိုက်ပီး မီးညှိပေးလိုက်သည်။ “အဖြစ်က ဒီလိုဗျ…….” ဆာပုလင်းမြမောင်တယောက်တုတ်ကြီးရဲ့ ဝန်ခံထွက်ဆိုမှုများကို မှတ်တမ်းတင်ပြုစုပြီး မင်းကြီးဆမြုရယ်အိမ်သို့ ညစာစားရန် သွားလေတော့သည်။ အရာရှိကြီးဖြစ်၍ အိမ်မှာလွန်စွာ ကြမားခန့်ထည်လှပေသည်။ ခြံစောင့်ကုလား မှတခါးဖွင့်ပေး၍ အိမ်တွင်းဝင်ရလေသည်။ ထမင်းစားပွဲမှာတော်တော်ရှည်လေသည်။ ဆယ်ပေပက်လည်လောက်ရှိသည်။ စားပွဲပေါ်တွင် သစ်သီးများ ဝိုင်များနှင့်အသားကင်များတင်ထားလေသည်။ “ဟာ..လူကလေးမြမောင် လာဟေ့.ကျုပ်စောင့်နေတာကြာလှပီ” မြမောင်မှာ မင်းကြီးမျက်နှာချင်းဆိုင်မှာထိုင်လိုက်သည်။ “ဂွတ် ညနေ မင်းကြီး ကျုပ်နောက်ကျလို့ ခွင့်လွှတ်ပါ” မင်းကြီး ဝိုင်များအလွန်သောက်ထားပုံရသည်။ မူးနေလေသည်။
ထိုစဉ် အမျိုးသမီးတယောက် စားပွဲ ဘေးအလည်ခုံမှာ ဝင်လာထိုင်လေသည်။ “လူကလေးရေ..ဒါက ကျုပ်မိန်းမပဲ.. မနေ့ကမှရောက်လာတာ.. စင်သီယာလို့ခေါ်တယ်” မြမောင် ထရပ်၍ “ကျုပ်က မြမောင်ပါ..စင်သီယာ” ဟုဆိုပီးလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လိုက်သည်။ ဆံပင် အိုမီဂါ ကေနှင့် ဂါဝန်ဖြူပါးပါးဝတ်ထားသဖြင့် စင်သီယာ၏ ကိုယ်လုံးကိုမြင်နေရလေသည်။ အင်္ဂလန်သူ ဖြူချောကြီးဖြစ်သည်။ ” ရှင် က အင်္ဂလိပ်စကားတော်တော်ကျွမ်းကျင်တာပဲ” ဟု စင်သီယာက ချီးကျူးလေသည်။ မင်းကြီးမှာ မူးနေ၍ စကားကောင်းကောင်းမပြောနိုင်​တော့ပါ။ စင်သီယာလည်း အနည်းငယ်သောက်ထား၍မူးနေလေပီ။ တနာရီလောက်အကြာမှာ စင်သီယာက.. “မင်းကြီးကို အိပ်ခန်းထဲပို့ရမယ်ကူညီပေးပါ” “အိုကေ ပါ..စင်သီယာ” မင်းကြီး ကိုတယောက်တဖက်ဆီမလိုက်ကြသည်။ စင်သီယာကုန်းမလိုက်ရာ ရင်သားများမြင်ရလေသည်။ ဖြူဖြူအိအိ ကြီးများပင်။ ဂါဝင် အောက်မှ အတွင်းခံအနက်လေးမှာ ကြိုးသိုင်းအတွင်ခံဖြစ်၍ တင်သားများကို အရှင်းကြီးမြင်ရလေသည်။ လိုးသည့်အခါမှာချွတ်စရာမလိုပဲ အလည်ကြိုးလေးကို ဖယ်လိုက်ရုံနှင့် တန်းလိုးလို့ရပေသည်။ အိပ်ခန်းကုတင်မှာ အကြီးကြီးဖြစ်သည်။ လူလေးယောက်လောက်အိပ်လို့ရနိုင်သည်။ မင်းကြီးကို ကုတင်ပေါ်တင်ပေးပြီနောက် စင်သီယာက.. “မြမောင် မင်းသောက်ချင်သေးလား” “သောက်မယ်လေ ကျုပ်က နည်းနည်းနဲ့မဝဘူး” ဟုပြောပီး စင်သီယာ၏နို့ကို ကြည့်နေမိသည်။
မင်းကြီးအသက်မှာ၅၀ ကျော်လေပီ။ စင်သီယာက ခုမှ ၃၀ကျော်ရှိသေးသည်။ “စင်သီယာကျုပ်မူးသွားရင် ဘာလိုလုပ်မလဲ” “ဒီမှာအိပ် လေ မနက်မှပြန်ပေါ့” “အိုကေ အာ့ဆို အမူးသောက်မယ်” သူတို့နှစ်ဦး ရောက်တတ်ရာရာစကားပြောရင်းသောက်ရင်းနှင့် စင်သီယာမူးပါတော့သည်။ “ကျမ သွားအိပ်တော့မယ် ရှင်သောက်လို့ပီးရင် အဆင်ပြေသလိုအိပ်လိုက်ပါ ဂွတ်နိုက်” သူမ ထလိုက်ရာမူးလဲသဖြင့် မြင့်မောင်ကချိုင်းအောက်ကမ၍ အိပ်ခန်းထည်း ထဲ့စဉ်နို့ကြီးနှစ်လုံးကို ကိုင်မိ၍ လီးမှာထောင်ထလာလေသည်။ စင်သီယာကို ကုတင်ပေါ်တင်ပေးလိုက်သည်။ ထို့နောက် အခန်းပြင် ထွက်ဟန်ပြပီး အခန်းတခါးကိုအသာလေးစေ့ကာ ချောင်းနေလိုက်လေသည်။ သိပ်မကြာပါ သူမ မင်းကြီးဘက်လှည့်၍ေ​ဘးစောင်းအိပ်လိုက်ပီး ဂါဝင်ကို တင်သားများပေါ်အောင် ဆွဲတင်၍ ပေါင်လုံးကြီးကို ကုတ်နေလေသည်။ ညမီးက မှိန်မှိန်လေးထွန်းထားသော်လည်းအသားဖြူလွန်း၍ တင်အဖွေးသာကြီးကိုမြင်ရလေသည်။
ဒီည ရအောင်လိုးမည်ဟု ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ စင်သီယာ မအိပ်သေး။ မူးချင်ယောင်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ မြမောင်၏အကြည့်များမှာ မရိုးပေ။ တဏှာမျက်လုံးများနှင့် သူမကိုကြည့်နေတာသိသည်။ မင်းကြီးမှာအသက်ကြီး၍ မလိုးနိုင်တာကြာလေပီ။ မြမောင် ခြောင်းနေတာ သိသည် ခြေသံကတံခါးနားမှာ ရပ်သွားပီး တံခါးပိတ်သံလဲမကြား၍ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် တဖက်လှည့်၍ ပေါင်ယားသလိုလုပ်ကာ ဂါဝန်ကိုလှန်ထားလိုက်သည်။ မြမောင် ဝင်မလာ၍ စိတ်မရှည်တော့ တင်ကို ပိုကော့လိုက်ပီး ဂါဝန်ကို နို့ပေါ်အောင်ထပ်လှန်လိုက်လေသည်။ မြမောင်စိတ်မထိန်းနိုင်တော့ လီးမှာလည်း အရည်တွေထွက်နေလေပီ။ ထို့ကြောင့် ကုတင်နားကပ်သွားလိုက်သည်။ ဘေးစောင်းကာကောက်နေသော ဖင်ကြောင့် လိုးရန် အဆင်ပြေလေပီ။ ကုတင်ပေါ်ဖြေးဖြေးတက်လိုက်ပီး တင်သားကြားညပ်နေသော အတွင်းခံဘောင်းဘီကြိုးလေးကို ဖယ်လိုက်ရာ ပန်းရောင်စအိုဝနှင့် အရည်လဲ့နေသော အဖုတ်ရဲရဲလေးကိုတွေ့ရလေသည်။ စင်သီယာကို အသာလေးတွန်းမှောက်ကြည့်လိုက်၏။ အလိုက်သင့်လေး မှောက်သွားလေသည်။ ဘောင်းဘီချွတ်ကာ ပေါင်ပေါ်ခွလိုက်ပီး လီးဒစ်နှင့် အဖုတ်ဝကိုပွတ်လိုက်ရာ ဖင်လုံးလေးကော့တက်လာတော့သည်။
လီးကိုဖြေးဖြေး တဆုံးထိ သွင်းလိုက်ထုတ်လိုက်လိုးနေလိုက်၏။ အရမ်းကြမ်းလို့မဖြစ်ပေ ဘေးမှာအိပ်နေသော မင်းကြီးနိုးသွားလျင် ပြသနာကြီးပေမည်။ အဖြူမ အဖုတ်မှာအိစက်ညက်ညောလွန်းသည်ယ စင်သီယာတချက်ငြီးလိုက်ပီး ဒူးထောက်ဖင်ကုန်းပေးတော့သည်။ မျက်နနှာကို ခေါင်းအုံးနှင့်အပ်ထားပြီးပါးစပ်ကို သူ့လက်နှင့် သူပြန်ပိတ်ထားလေသည်။ သူမ မအိပ်ဘူးဆိုတာမြမောင်သိ၍ေ​ပျာ်သွားလေသည်။ ထို့ကြောင့်မတ်တပ်အပေါ်မှရပ်၍ တင်သားနှစ်ခုကို ထိန်းကိုင်ကာအပေါ်ဘက်မှ စိုက်လိုးပါတော့သည်။ “..အ့…” “ရှူး..စင်သီယာ..ကုတင်ပေါ်ကဆင်းရအောင်” လိုးသံများထွက်မှာစိုး၍ဖြစ်သည်။ ကြမ်းမှာကတီပါခင်းထား၍ သူမလှဲချလိုက်သည်။ သူမ အသံမထွက်အောင်နှုတ်ခမ်းချင်းတေ့၍ ပိတ်ထားလိုက်ပီး စောင့်စောင့်လိုးပါတော့သည်။ “အူး..အွင်း….” အဖြူမအသားမှာတကယ်စားကောင်းသည်။ စာရေးသူ နိုင်ငံခြားထွက်စဉ်ကစားဖူ၍ဖြစ်သည်။ မြမောင်လီး ကြီးရှည် ကြောင့် သူမကြာကြာမခံနိုင်ပါ အရေထွက်၍ပီးသွားလေသည်။ မြမောင်ဆက်မလိုးတော့ပဲ လီးကိုသူမပါးစပ်ထဲထိုးထဲ့ရာ သူမအထာသိလေသည်။ အလိုက်သင့်လေးစုပ်ပေးသဖြင့် သုတ်များထွက်ကုန်တော့သည်။
စင်သီယာကအရေများကို မြိုချပီးနောက်.. “မြမောင် ပြန်တော့နော်နောက်နေ့ထပ်တွေ့မယ် မင်းကြီးနိုးလာမှာစိုးလို့” “အိုကေ ပါ ကျုပ်ပြန်တော့မယ်” .. ​နောက်တနေ့မနက် မြမောင်သည် တုတ်ကြီး၏ဝန်ခံချက်များကို ပြန်လည်ဖတ်ရှုစီစစ်နေသည်။ ဝန်ခံသက်သေချက်များမှာ လွန်စွာ ရှည်လျှားလွန်း၍စာရေးသူ ရွှေကြာမြိုင် ကအကျဉ်းချုံး၍ ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။ေ​ရနံချောင်းမြို့တွင်းတနေရာ လူကုန်ထန်သဋ္ဌေးများနေသော ရပ်ကွက်တွင် မောင်မောင်တုတ်နှင့် ခင်ခင်လေးတို့်မိသားစုနေထိုင်ကြသည်။ ရတနာကုန်သည်များဖြစ်ကြ၍ လွန်စွာချမ်းသာကြသည်။ မြမြနှင့်ဘရွှေဆိုသော အသက်၂၀အရွယ်မောင်နှမနှစ်ဦးမှာ ထိုအိမ်တွင်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ တနေ့တွင်သူတို့နှစ်ဦးမှာအိမ်ရှင်တွေကို လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်၍ ရတနာများကိုခိုးယူကာ ထွက်ပြေးသွားကြသည်။ မောင်တုတ်နှင့် ခင်လေးတို့မှာ မိဘမဲ့များဖြစ်သွားကြလေသည်။
ထိုကြောင့် ဆန်စက်သဋ္ဌေးဦဘကလေးမှ ခင်လေးတို့အားခေါ်ယူမွေးစားကာ ကြီးပြင်းစေခဲ့လေသည်။ အရွယ်ရောက်လာသော မောင်နှမနှစ်ယောက် ရန်သူများအား လက်စားချေရန် စီစဉ်ကြလေသည်။ မောင်တုတ်သည်ပညာမတတ်ပေ။ သူဝါသနာပါသော ကျောက်သွေးသည် အလုပ်လုပ်ရင်းရန်သူများကို ရှာဖွေလေသည်။ တယောက်ထဲရှာဖွေရတာ အစဉ်မပြေ၍ လူမိုက်များကိုငွေပေးကာ ခိုင်းစေလေသည်။ နှစ်အနည်းငယ်အကြာမှာ လူမိုက်ခေါင်းဆောင် တုတ်ကြီးဖြစ်လာလေသည်။ လူမိုက်ဖြစ်သွား၍ ရတနာကျောက်သွေးအလုပ်က အဆင်မပြေတော့။ ထို့ကြောင့် ဂေါ်လီသွေးလေသည်။ ဂေါ်လီများမှာလက်ရာမြောက်လှသဖြင့် တဏှာရူးနှာဘူးများက လာရောက်ဝယ်ကြထည့်ကြလေသည်။ သူကိုယ်တိုင်လည်း လီးပတ်လည်မှာ အရှေ့ငါးလုံး အနောက်ငါးလုံးကွင်းလိုက်ထည့်ပီး ကြေငြာပြသဖြင့် ဆယ်ဂေါ်လီတုတ်ကြီး ဟုအမည်တွင်ခဲ့လေသည်။ တနေ့တွင် ရန်သူတော်ဘရွှေတာမွေတွင်နေထိုင်သည်ဟု သိလိုက်ရသည်။
ထိုအရပ်သည် ဆားပုလင်းမြ​မောင်၏အပိုင်ဖြစ်၍ အရမ်းမလုပ်ရဲပေ။ ထို့ကြောင့်ခင်ခင်လေးကိုအကြောင်းကြား၍ မြမောင်နှင့်လိုးပွဲဆင်နွှဲချိန် ဘရွှေကိုသတ်ရန်စီစဉ်ကြလေသည်။ (ထိုဇာတ်လမ်းကိုအပိုင်း၁တွင်တင်ပြပီးဖြစ်သည်) မြေမောင်နှင့်ခင်လေး လိုးရည်လူးနေချိန်ဘရွှေကိုသတ်ကာ မောင်တုတ်ပုန်းရှောင်နေလိုက်သည်။ ဒေါ်မြမြအလှည့်ကျန်လေသည်။ ဒေါ်မြမှာခိုးယူသွားသော ရတနာများကို ဘရွှေနှင့်တဝက်စီခွဲယူ၍ ရတနာကုန်သည်အဖြစ် တဦးထည်းနေလေသည်။ အိမ်ထောင်မပြုပေ။ ဒေါ်မြသည် တဏှာကြီးသောမိန်းမတဦးဖြစ်သည်။ တပါတ်တခါ ယောက်ျားဖာများကိုခေါ်ယူ၍အလိုးခံကာ ကာမစိတ်ဖြေဖျောက်လေသည်။ တုတ်ကြီးသိလိုက်ရသည်။ ထို့ကြောင့် ရန်ကုန်ရှိနာမည်ကြီးစကော့ဈေးနှင့် ပန်းဆိုးတန်းအရပ်မှ ဖာတန်းများမှာ မမများအတွက်လိုးပေးသူဟုအမည်မှဲ့ကာ ကြေငြာလေသည်။ သိပ်မကြာပါ ဒေါ်မြအငှါးလင်လာရှာလေသည်။ တုတ်ကြီးဒေါ်မြနှင့်တွေ့လေပီ။ “မမ..ကျနော်ကစိတ်တိုင်းကျစေရမယ်နော်..ငွေကြေးက မမသဘောပါ” ဒေါ်မြ မှာ အရပ်မြင့်မြင့်နှင့်ရုပ်ချောသော ကောင်လေးကို စားချင်သွားသည်။
ထို့ကြောင့် “မောင်လေးက..ကြာကြာလုပ်နိုင်ပ့မလား၊ မတ်မတ်က တက်ထွက်မကြိုက်ဘူးနော် အနည်းဆုံး မိနစ်၃၀မှကြေနပ်တာ” “ကြာစေရမယ် မမ..စိတ်တိုင်းမကျရင်.. မမစီးတဲ့ဖိနပ်နဲ့ မောင်လေးကိုရိုက်ပါနော် ..” မျက်နှာငယ်လေးနှင့်ပြောဆိုနေသောကြောင့် ဒေါ်မြ အသည်းခိုက်ကြွေဆင်းလေပီ။ ထို့နောက် အိမ်လိပ်စာရေးပေးလိုက်ပီး “နက်ဖြန်ည၉နာရီလာခဲ့မတ်မတ်စောင့်နေမယ်.. ခြံတခါးဖွင့်ပေးထားမယ်.ဝင်လာခဲ့” ….. နောက်နေ့ည ဒေါ်မြအလိုးခံဖို့ပြင်ဆင်နေလေသည်။ ၉ နာရီ မထိုးခင်ထည်းက မောင်တုတ်မှာအိမ်ထည်းရောက်နှင့်နေလေပီ။ နောက်ဖေးခြံစည်းရိုးကျော်ဝင်ခြင်းဖြစ်သည်။ အိမ်နေါက်အခန်းတခုတွင် အိမ်ဖော်မနှင့် ဒရိုက်ဘာတို့ လိုးနေတာမြင်လိုက်ရသည်။ (ဖြူတုတ်နှင့်မဲကြီးဖြစ်သည် အပိုင်း၂တွင် ဖတ်ရှုနိုင်သည်) အိမ်အတွင်းတနေရာတွင် ပုန်းနေလိုက်သည်။ ၉ နာရီမှာ ဒေါ်မြသည် အပေါ်ထပ်မှဆင်းလာ၍ ခြံတံခါးသွားဖွင့်လေသည်။ ဒေါ်မြ ဂါဝန်အပါးဝတ်ထားသောကြောင့် နို့ကြီးနှင့်ဖင်ကြီးများမှာ မြတ်ကေသီအောင်လို ကြည့်ကောင်းလှသည်။
အပေါ်ပြန်တတ်သွားသော ဒေါ်မြနောက်တိတ်တိတ်လေးလိုက်၍.. “ဟိတ်..မမ..” “အမလေး” “မောင်လေး..မမလန့်လိုက်ထှာ..ဝင်လာတာမကြားရဘူးနော်.. သူသိပ်တော်တာပဲ” ဒေါ်မြ၏နို့ကြီးနှစ်လုံးကိုအားရပါးရဆုတ်ကိုင်လိုက်ပီး “အိမ်မှာဘသူတွေရှိသေးလဲမမ..တော်ကြာသူများဒေ ကြားရင် ရှက်စရာကြီး” “အိမ်ဖော်လင်မယားပဲရှိတယ်.ခနစောင့် တခုခုဝယ်ခိုင်းလိုက်မယ် အာ့မှ အလွတ်ကဲလို့ရမှာ..ခ်..ခ်..” ဒေါ်မြအူမြူးနေသည်အသတ်ခံရမှာမသိခဲ့ပေ။ အခန်းပြင်ထွက်သွားလိုက်ပီး “ဟဲ့..မဲကြီးရေမဲကြီး..ဒန်ပေါက်သွားဝယ်စမ်းငါဗိုက်ဆာလို့” ဟုအော်ပြောလိုက်လေသည်။ ထိုအခါအောက်ထပ်မှ “ဟုတ် မမကြီး” ဟု အသံကြားပီးနောက် ဒေါ်မြ ပြုံးပြီးပြန်ဝင်လာလေသည်။ “မမရေစရအောင်မောင်လေးထန်နေပီ.” တုတ်ကြီးရဲ့လီးနေရာကိုဒေါ်မြလက်ခလေးနဲ့ အသာအုပ်ကိုင်ပီးနောက် “မောင်လေးဟာ အရင်ပြကွာ ကိုင်ချင်တယ်..” မောင်တုတ်ဘောင်းဘီရှည်ကိုချွတ်ချလိုက်ရာေ​ဂ်ါလီစကြာနှင့် ၈လက်မလီးကြီးက မတ်ထောင်လာတော့သည်။ “ဟင်..ဒါဘာတွေလဲ..ကြောက်စရာကြီး ဒါ.. ဒါနဲ့ မမကိုလိုးရင် နာမှာပေါ့” ဒေါ်မြလန့်သွားပီးစကားများပင်ထစ်နေတော့သည်။
“မကြောက်နဲ့မမ စမ်းကြည့်လိုက် အရမ်းကောင်းတာ မမသိစေရမယ်..” ဒေါ်မြကိုဆွဲဖက်၍ ကစ်ဆင်ဆွဲကာ စောက်ဖုတ်ကလိပေးလိုက်သဖြင့် ငြိမ်ကျသွားလေသည်။ ထိုနောက် ကုတင်စောင်းမှာ လှဲချလိုက်ရာ ကိုယ်လုံးမှာ ကုတင်ပေါ်ပက်လက်ဖြစ်ပြီး ခြေထောက်မှာ အောက်တွဲလောင်းဖြစ်နေသည်။ ခြေထောက်ကိုဖြဲကားလိုက်ပီး ပြဲအာနေသောအဖုတ်တွင်းလီးကိုတေ့ကာ ဒေါ်မြလက်နှစ်ဖက်ကို ချုပ်ထားလိုက်သည်။ ဒေါ်မြလှုပ်လိုမရတော့ လီးကိုအားကုန်စောင့်လိုးထည့်တော့သည်။ “ဗြစ် ဒုတ် အား..အား..အူး…” အော်သံမထွက်အောင်ပါးစပ်ကိုဖိပိတ်လိုက်ပီး ထပ်ဆောင့်သည်။ လီးကကြီးသလို ဂေါလီများကြောင့်အဖုတ်မှာ ပြဲကွဲကာ သွေးများထွက်လာတော့သည်။
“ဒေါ်မြ..ခများ မှတ်မိလား ကျုပ်ကေ​မာင်မောင်တုတ်လေ ခဗျားတို့ကျုပ်မိဘတွေကို သတ်ပီးပြေးသွားတာ ခုပြန်ပေးဆပ်ရမယ်” ဒေါ်မြလန့်ဖြန့်သွားပီးရုန်းကန်လေတော့သည်။ မရပါ ဆွဲမှောက်၍ စအိုကိုထပ်လိုးသဖြင့်ေ​သွးထွက်ပြန်လေသည်။ “ငါတောင်းပန်ပါတယ် ဗီဒိုထဲမှာစိန်တွေရှိတယ် ပြန်ယူသွားပါနော်” “မယူဘူး ခများသေရမယ်” ဟုဆိုကာ ခပ်ကြမ်းကြမ်းထပ်ဆောင့်လိုက်၏။ ဒေါ်မြအား ကုန်သုံးအော်သဖြင့် ဂုတ်ကိုအိပ်ဆောင်ဓားဖြင့် ထိုးလိုက်ရာ သေလေသည်။ ထိုနောက် ဒေါ်မြ ဗီဒိုမှစိန်များကိုယူ၍ ကြမ်းပေါ်ကြဲချလိုက်ပီး ဘောင်းဘီအတွင်းမှ သူ၏လက်ရာမြောက် ဂေါ်လီလေးကိုထုတ်ယူကာ စိန်များနှင့် ရောထားလိုက်လေသည်။ “ဆားပုလင်းမြမောင်ရေ.ခများမျက်စိလျှင်ရင် ကျုပ်ကိုလာရှာပါ” ဟုပါးစပ်မှရွတ်နေစဉ် အောက်ထပ်မှလူတက်လာသံကြား၍ ပြတင်းမှ ခုံဆင်းထွက်ပြေးလေတော့သည်။ … ပြီးပါပြီ ရွှေကြာမြိုင်